Tesalônika - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Tesalonika)
I Tesalônika dia tanàna ao Grisia izay renivohitry ny distrikan' i Tesalônika akehitriny, miorina ao amin' ny sisin' ny Helodrano Termaîka. Renivohitry ny sisin-tanin' i Makedônia afovoany ao amin' i Makedônia grika io tanàna io amin' izao fotoana izao sady diôsezy itsinjaram-pahefan' i Makedônia-Traka.
Amin' ny teny grika dia atao hoe Θεσσαλονίκη / Thessalonikê (na Thessalonitsi amin' ny fanononana grika vaovao) na Σαλονίκη / Salonikê (na Salonitsi amin' ny fanononana grika vaovao) io tanàna io. Amin' ny teny slava izy dia atao hoe Солун / Solun, amin' ny teny jodeô-espaniôla (fiteny ladinô) dia סלוניקה / Salonika, ary amin' ny teny romaniana dia Sãruna. Amin' ny teny torka izy dia atao hoe Selanik.
I Tesalônika dia naorin' i Kasandra avy any Makedônia tamin' ny taona 315 tal. J.K. ary nomena izany anarana izany ho voninahitry ny vadiny atao hoe Tesalônika (grika: Θεσσαλονικη / Thessalonikê) izay notolorany an' ilay tanàna ho antoky ny fitiavany azy. Ny anaran' i Tesalonika (grika: Θεσσαλονικη), zanak' i Filipo II avy any Makedônia sy anabavin' i Aleksandra Lehibe tsy iray reny aminy, dia avy amin' ny fanakambanana ny teny hoe Θεσσαλών / Thessalôn ("Tesaliana") sy ny hoe νίκη / nikê ("fandresena"), ho fahatsiarovana ny fandresen' ny Makedôniana ny mponin' i Fôkisy (grika: Φωκίς / Phôkís) tamin' ny fanampian' ny Tesaliana (mponin' i Tesalia; grika: Θεσσαλία / Thessalía).
Vanimpotoana rômana[hanova | hanova ny fango]
Taorian' ny fanitaram-panjakana nataon' ny Rômana dia nanjary renivohitry ny faritanin' i Makedônia i Tesalônika. Nanamboatra ny lalana Egnatia mampitohy an' i Dirakioma (latina: Dyrrachium) amin' i Bizantioma (na Bizansa; latina: Byzantium) ny Rômana ka nampiroborobo ny fandrosoan' ilay tanàna izany satria ny mpanao raharaham-barotra mandeha dia tsy maintsy mandalo eo. Tamin' ny taona 50 dia nitory ny fivavahana kristiana ao Tesalônika i Paoly ka maro ny Tesalônisiana (na Tesalôniana) niova finoana ho kristiana. Nanoratan' i Paoly epistily manokana ny Kristiana tao Tesalônika.
Taty aoriana dia nisafidy ny honina ao Tesalônika ny emperora Galerio (latina: Galerius) ary nanamboatra lapa sy tranom-panjakana maro. Nanenjika ny fivavahana kristiana izy ka tamin' izany no namonoany an' i Demetriôsy (grika: Δημήτριος / Dêmêtrios) ho faty (izay lasa Md Demetriôsy ankehitriny sady mpiahy sy mpiaro ny tanànan' i Tesalônika).
Tamin' ny taona 322 I Kônstantino I (latina: Constantinus) dia nanomboka nanamboatra ny manda fiarovana sy ny serana-tsambo izay mandray anjara amin' ny fampandrosoana ny fiharian-karen' ilay tanàna. Ny fanorenana an' i Kônstantinôpôlisy sy ny fivangongoan' ny fahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana vokatr' izany dia nahatonga an' i Tesalônika ho tsy ivontoerana, tsy araka ny maha ivo ara-jeôgrafia azy. Tamin' ny taona 390 dia nampandringana ny mponina tao Tesalônika izay nokomy ny emperora Teôdôsio I (latina: Theodosius) ka teo anelanelan' ny 7 000 sy 10 000 no maty.
Nanomboka tamin' ny taonjato manaraka dia lasa renivohitry ny prefektioran' i Ilirikoma (latina: Illyricum), izay fari-piadidiana midadasika tao amin' ny Empira Rômana nahafaoka ny Saikanosy Balkanika saika manontolo, i Tesalônika. Ny fandraisan' ny mponinina trakiana mpifanolo-bodirindrina amin' i Tesalônika dia niteraka ny fisian' ny vahoaka vitsy anisa Valâka ankehitriny, fa ny fandraisan' ny ankamaroan' ny mponina ny fivavahana kristiana lasa aloha kosa dia nahatonga an' i Tesalônika hiditra ao amin' ny sivilizasiona bizantina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesalônika&oldid=1041505"
Voaova farany tamin'ny 13 Desambra 2021 amin'ny 14:35 ity pejy ity.